Afrika, 28 December 2012
Khamiis 28 December 2012
Hay'adda MSF ayaa waxa ay walaac ka muujisay qatarta caafimaad ee ka dhalan karta hadalkii dhawaan ka soo yeeray dowladda Kenya ee ahaa in Soomaalida magaalooyinku ay ku laabtaan xeryaha qatooxiga.
Guddiga Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa soo bandhigay diiwaangalinta tirada Soomaalida lagu dilay sannadkan 2012ka dalka Koofur Africa, wuxuuna sheegay in 100 Soomaali ah lagu dilay goobo kale duwan oo dalkaasi ku yaalla.
Xisbiga PND ee Djibouti oo u kala Jabay 2 Garab
Xisbiga siyaasadda PND ee Djibouti ayaa u kala jabay 2 garab, kadib markii Xubno ka tirsan xisbiga ay sheegeen inay xilkii ka qadeen guddoomiye Adan Roble Cawaale, balse Aadan ayaa isagu ku adkaystay inuu inuu yahay guddoomiyaha sharciga.
Madaxda Afrika: Mali Ma noqonaysa "Afghanistan"
Hoggaamiyayaasha Africaanka ayaa sheegaya inaysan oggolaan doonin in dalka Mali uu noqdo dal gabaad u ah argagixisada, dal fashilmay iyo dal loogu yeero "Afghanistan" oo ku yaalla gobolka Saaxil
Natiijooyin hor-dhaca ah oo ka soo baxaya aftdii loo qaaday dastuurka ayaa muujinaysa in dadka reer Masar ay ogolaadeen dastuurka. Akhwaanul-Muslimiin ayaa sheegay in 64% ay dadku "haa" ku codeeyeen.
17 gobol oo ka tirsan dalka Masar waxaa maanta oo Sabti ah ka dhacaya codbixinta wareeegga labaad ee aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee muranka dhaliyey.
Xaafadda Islii waxaa ka dhacay qarax, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ilaa saddex qarax ay dhaceen. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow masjidka al-Hidaaya oo ah masjidkii dhawaan lagu dhaawacmay xildhibaan Yusuf Xasan.
Masar oo Afti u Qaadaysa Dastuurka Cusub
Dadka Masar ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya wareegga koowaad ee afti loo qaadayo dastuurka cusub ee dalkaasi ee muranka badan ka dhex-dhaliyay Masaarida.
Sarkaal: Al-Shabab oo $8000 ku Bixinaysa Dilalka Askarta Kenya
Sarkaal Kenya ayaa sheegay in xiriir dhinaca is-gaarsiinta ah oo dhexmartay al-Shabaab ka heleen heleen xog sheegaysa in al-Shabab ay 8-kun oo Dollar oo abaalmarin ah siinayo qofkii soo dila ciidanka Kenya.